rameshbhandari, Author at Kavyalaya - काव्यालय
by rameshbhandari १० अशोज २०७७
सुनसान रात, निस्पट्ट अँध्यारो, नदीको किनार, एकातिर काँडै-काँडाको घारी अनि अर्कोतिर डरलाग्दो जंगल । कालो अन्धकारलाई चिर्ने दुष्प्रयास गर्दै झ्ल्याक-झुलुक देखिने केही धुँवाको मुस्लो जस्तो त केही कंकाल जस्तो आकृतिले…
रत्नपार्क, लकडाउन र गरीबी !
by rameshbhandari १३ भदौ २०७७
एउटा पुरानो साइकलमा त्यसको तौलको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भारी लादेर पुराना कपडा लगाएको एक मधेसी मुलको अधबैंसे पुरुष चिया पसलको अगाडि उभिरहेको थियो । नजिकै एक हुल युवाहरु चियाबाट उडिरहेको…
by rameshbhandari २४ साउन २०७७
नितान्त एक्लो जुनेली रातलाई आँगनको बत्तीले थोरै उज्यालो थपेर साथ दिइरहेको छ । नजिकैको काठको कुर्सीमा बसेर म धेरै समयपश्चात हातमा कलम समाउँदै आकाशका ताराहरू गनिरहेछु अनि अड्कल काटिरहेको छु,…
मलाई फाँसी दे सरकार !
by rameshbhandari ३ साउन २०७७
श्रीमान् न्यायाधीश ज्यु, आशा छ यो कागजमा देखिने कालो मसीले कोरिएका अक्षरहरु हजुरले पढ्ने कष्ट गर्नुहुनेछ अनि महिनैपिच्छे रगतको मसीले रंगिने अदृश्य कागजका र कात्रोमा लम्पसार परेका मृत शरीरहरुको संख्यामा…
by rameshbhandari २७ बैशाख २०७७
लकडाउन र भोक प्यासले देश नै आक्रान्त भइरहेको घडिमा पनि ऊ मस्त जिन्दगी बिताउँदै थियो, अथवा जबरजस्त बाँचेजस्तो अभिनय गरिरहेको थियो ! बाहिरबाट झट्ट हेरेर कसैको भित्री हृदयमा कसरी पो…
by rameshbhandari ६ बैशाख २०७७
प्रिय बुलबुल, माफ गरिदिनु, आज पनि प्रिय शब्दको प्रयोग गरेकोमा ! अँ, साच्चै उसले त गुलाबो भन्छ रे, म चाहिँ अन्तिम पटक उसकी गुलाबोलाई बुलबुलले नै सम्बोधन गर्दै छु ।…
by rameshbhandari ८ चैत्र २०७६
“कस्तो पट्यारलाग्दा दिनहरु हुन् हौ, न काम गर्न मन लाग्छ, न त बसिरहन नै !” एक हाफ चाउमीन दिँदै भाउजुले थप्नु भयो, “न त व्यापार नै छ, न फुर्सद !…